ANDRANGANALA : Mampiaka-peo amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny mponina
Velon-taraina amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ataon’ny Sinoa ao Andranganala ny mponina any an-toerana. 10 novembre 2021
Volamena, colombite, béryl, quartz… ampahany amin’ny harena an-kibon’ny tany ataon’ny Sinoa tantely afa-drakotra avokoa ireo. Tsy misy tamberin’andraikitra mankany amin’ny mponina anefa izany ary voalaza fa tsy voahaja ny fepetra ara-tontolo iainana.
Araka ny angom-baovao natao, tsy manana fahazoan-dalana hitrandraka ara-dalàna ireto Sinoa ireto fa taratasy fahazoan-dalàna hanao fikarohana andrana na “Permis de recherche” tsotra no ampiasainy. Tsy mifanaraka amin’izay anefa ny fitaovana itrandrahana harena an-kibon’ny tany fa tena raitra dia raitra ary mampiasa olona maro be mihitsy.
Ahitana teratany malagasy sy vahiny, mpandika teny… Nanangana toho-drano lehibe manodidina ny toeram-pitrandrahana ireo Sinoa ireo, ka nisy fiantraikany mivantana amin’ny fiainan’ny mponina andavanandro izany : Tsy maharaka intsony ny rano anondrahana ny fambolena, mijaly ny biby fiompy. Ny tena loza aza, mivarina any anaty rano ampiasain’ny mponina avokoa ireo potika vato sy akora simika avy itrandrahana. Voakasik’ity voalaza farany ity mivantana ny mponina ao Androfia sy Ambalanirana. Efa nisy fotoana nanao fihetsiketsehana nanaitra ny sain’ny Mpitondra Fanjakana sy ny tompon’andraikitra any an-toerana ireo mponina saingy toy ny antso an’efitra ihany ny fitarainan’izy ireo. Tsy nisy namaly, tsy nisy nijery.
Tsy mazava ihany koa ny fifanarahana eo amin’ity orinasa ity sy ny Kraomita Malagasy. Araka ny angom-baovao hatrany, ny Kraoma no tompon’ny tany itrandrahana kanefa tsy misy tamberiny mankany amin’ity farany izany. Tamin’ny taona 2018 izany hoe tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina no nanomboka naka toerana tany amin’ity faritra ity ireo Sinoa. Tsy misy anefa hatramin’izao ny tamberin’andraikitra ataon’ ireo Sinoa ho an’ny mponina manodidina. Raha ny tokony ho izy, anjara andraikitr’ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara ny manangana fotodrafitrasa mifanaraka amin’ny filan’ny mponina any amin’ny toerana iasany. Tsy misy izany anefa any Andranganala na iray aza, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny mponina iray : “Efa nanomboka tamin’ny taona 2018 no nitrandraka teo ireo Sinoa ireo, talohan’io dia efa nampiditra fitaovana sy nivezivezy taty izy ireo. Tsy mbola nisy anefa ny fotodrafitrasa natsangana ho an’ny mponina. Olona avy any ivelany avokoa no nosafidiany hiasa amin’ny fitrandrahana fa tsy misy avy ety amin’ny manodidina na iray aza. Nisy ihany ny fanamboaran-dalana nataon’ireo, saingy vao mainka nitera-doza ho anay satria tanimbarim-bahoaka no nototofana. Tsy nierana tamin’ny vahoaka akory io fanamboaran-dalana io fa natao amboletra”, hoy ny fanazavana.
Misy akony ara-tontolo iainana koa ity fitrandrahana ity ka iantsoana ny Minisitra tompon’andraikitra. Tsy fantatra mazava mantsy na manana fahazoan-dalana ara-tontolo iainana na “permis environnemental” ireto mpitrandraka. « Tsy azo inoana aloha ny fisian’io fahazoan-dalana ara-tontolo iainana io satria na ilay fahazoan-dalana hitrandraka aza efa tsy ara-dalàna. Fahazoan-dalana hanao fikarohana no ananan-dreo kanefa fitrandrahana tsy hita pesimpesenina ny zavatra ataony. Tsy amin’ny grama fa amin’ny kilao isan’andro ny harena an-kibon’ny tany miakatra avy ao. Inona no asa sosialy ataon’io orinasa sinoa io amin’ny mponina izay simba rano sy tontolo iainana ? Nahavita “consultation publique” ve ? Iza loatra no manao baranahiny sy tantely afa-drakotra ny harem-pirenena toa izao ? Hojerena fotsiny ve io ? Mankaiza ny vokatra azo ? Ny volamena azo ? Ny Banky Foibe ve no androtsahana ny volamena azo sa tombontsoan’ireo Sinoa ranoray”. Sao dia mba tokony hotakiana ny handoavan’io vola amin’ny Kraoma sitrany ahay misy hoentina mihetsika hamelomana ny Kraomita”, hoy ny fanontaniana napetrak’andriamatoa Dina Andrianirina, mpitondra tenin’ny mponina.
Misy olom-boafidy ?
Mangataka amin’ny Fanjakana hanesorana ireo Sinoa ireo ao ny mponina. Efa nisy fotoana nakaton’ny mpikambana tao amin’ny Kraoma ny fitrandrahana nataon’ireto Sinoa ireto. Mbola nijanona tao an-toerana hatrany anefa ny fitaovana sy ireo mpiasa ka nanohy mangina ny fitrandrahana. Hetahetan’ny mponina kosa ny hanalana tanteraka ireo Sinoa mpitrandraka amin’izao fotoana ka iantsoana mpiara-miombon’antoka hafa mahafeno fepetra sy manaraka ny mangarahara. “Potika tanteraka, tsy misy azo ampiasaina intsony ny tany avy nitrandrahan’ireo Sinoa ireo. Tsy izay ihany, fahavoazana tsy roa aman-tany no mahazo ny volin’ny mponina any an-toerana rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Entin’ny riaka avokoa ireo poti-tany avy nanivanana ka any amin’ny fambolen’ny mponina no mifatratra. Io faritra itrandrahana io anefa tsy azo idirana, tsy misy tompon’andraikitra avy ao amin’ny orinasa mihaino ny fitarainan’ny mponina fa ny ataony ihany no ataony”, hoy hatrany ny fitarainan’ ireo avy amin’ny solotenan’ny mponina.
Voalaza fa misy olom-boafidy sy tompon-andraiki-panjakana maromaro avy ao amin’ny Faritra Betsiboka miray tendro sy manao kopaka isasahana amin’ireto Sinoa ireto. Ireo no miaro ireo Sinoa ka tsy ahafahan’ny mponina mihetsika na efa mizaka ny tsy eran’ny aina aza. “Mandiso fanantenana ny mahare fa misy olom-boafidy natokisan’ny vahoaka miray tendro amin’ireo Sinoa ireo. Hiaro ny tombontsoam-bahoaka no nifidianana azy ireny kanefa fanitsakitsahana sy fampihinanana maloto ny vahoaka indray no ataony rehefa lany izy ireo. Ny Sinoa indray no tompoiny. Mangataka ny Fitondram-panjakana sy ny Filoha Andry Rajoelina, izahay hijery akaiky ity zava-misy ity satria tena mijaly ny mponina. Efa manomboka mahazo vahana ny aretina amin’izao. Farofy lava ny mponina ao Andranganala, Androfia noho ireo akora simika maro miparitaka”, hoy Ravelomanana Georges, mponina ao Andranganala.